स्वास्थ्य Archives | Page 13 of 15 |
स्तन आकर्षक बनाउन चाहनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
२०७४, १६ कार्तिक बिहीबार १८:३४ November 2, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी । सुन्दर बन्ने रहर कस्लाई नहोला र विशेषगरी महिलाहरु यसमा बढि चासो दिने गर्दछन् । यो स्वभाविक पनि हो । किनकि महिलाहरुलाई सौन्दर्यको प्रतिक पनि मानिन्छ ।महिलाहरु विशेषतः आफ्नो शारीरिक बनावटलाई लिएर चिन्तित हुने गर्दछन् । फलस्वरुप एकले अर्काको शरीरिक…
गुप्ताङ्गका रौं काट्दा कस्तो असर पर्छ ? आयो डरलाग्दो
२०७४, १६ कार्तिक बिहीबार १८:२९ November 2, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी । शरीरको बाँकी अंगको तुलनामा गुप्ताङ्ग क्षेत्रको रौं काट्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? यदि सोच्नुभएको छैन भने अब जान्नुस्ः शरीरको अन्य ठाउँको तुलनामा गुप्ताङ्ग क्षेत्रमा रौंको बृद्धि विकास बढी हुने गर्छ । मानिसले पनि गुप्ताङ्गका…
गर्भअवस्थामा संभोग गर्नु हुन्छ की हुँदैन ? जानी राखौं
२०७४, १६ कार्तिक बिहीबार १८:२४ November 2, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
काठमाडौं । विवाह भैसकेपछि संभोगक्रिया प्राकृतिक कुरा हो । तर कतिपय श्रीमान् र श्रीमतीहरुको त संभोगको आनन्द अपनाउन नपाई गर्भ रहेको पनि हुन्छ । यस्तोमा बच्चा जन्माउनु पनि महत्वपुर्ण ठान्ने जोडीहरुका लागी संभोग गर्न नपाएको तनावपनि हुन सक्छ ।तैपनि गर्भ…
२०७४, १५ कार्तिक बुधबार २३:१३ November 1, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
विश्वभरीकै ट्रेन्ड हेर्ने हो भनेपनि सबैभन्दा चांडो समस्या आउने अंग हो आँखा । यहि ट्रेन्डका कारण विश्वभरका करोडौं मानिस आँखाका रोगी छन् भने धेरैले चस्माको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । तर समयमै खाने कुरामा विशेष ध्यान दिने हो भने चस्मा…
साबधान ! यी हुन् कण्डमले पनि बचाउँन नसक्ने ४ यौनरोग
२०७४, १४ कार्तिक मंगलवार २१:१५ October 31, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
कण्डमलाई परिवार नियाेजनका अस्थाई साधनको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले यौनसँग सम्बन्धित रोगहरुबाट बचाउछ भनेर प्रयोग गर्ने गरिन्छ । तर यो थोरै मनिसलाई मात्र जानकारी होला की कण्डमले पनि बचाउन नसक्ने यौन रोगहरु छन् भनेर । जानी राखौ केके हुन्…
पुरुषको लिङ्गको बारेमा १४ रोचक तथ्य | जानी राखौं
२०७४, १४ कार्तिक मंगलवार २०:५३ October 31, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
पुरुषको यौनांग अर्थात् लिंग पुरुष प्रजनन प्रणालीको एक अभिन्न अंग हो । यसको जतन तथा सरसफाइमा गच्छे अनुसार सबैले ध्यान दिएकै हुन्छन् । तर यो अंगका बारेमा केही त्यस्ता गम्भीर विषयहरु छन् जसको बारेमा धेरैलाई थाहा हुँदैन र जानी नजानी…
२०७४, १० कार्तिक शुक्रबार ०९:५१ October 27, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
एजेन्सी । केटि अथवा महिलाहरु धेरै आधुनिक ड्रेसअप गर्ने र राम्रो देखिनको लागि शरीरका रौँहरु पनि हटाउने गर्दछन् । त्यसैगरी अजकलका युवतीहरु गर्मीमा छोटा कपडा लगाएर शोअप भनौं या खुलेर हिड्न रुचाउने गर्छन्। यस्ता खालका कपडाहरु लगाउँदा उनीहरुको काखीमा हुने…
सेक्स गरे लगत्तै पिसाब फेरेमा गर्भ रहन्छ की रहदैन? जानी राखौं
२०७४, ८ कार्तिक बुधबार २२:१४ October 25, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
गर्भ रहन धेरै कुराको तालमेल मिल्नुपर्छ । कतिपय स्थितिमा पहिलो वा एक मात्र यौनसम्पर्कमा नै गर्भ रहन्छ, तर सधै यस्तो हुँदैन । यौनसम्पर्क का बेला पुरुषको वीर्यस्लखलन हुँदा निस्किएका करोडौं शुक्रकीटमध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बबाहिनी नलीमा…
२०७४, ३ कार्तिक शुक्रबार १७:१८ October 20, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
काठमाडौं । प्रायःजसो महिलाहरुको शरिरको छालाभन्दा योनिको बाहिरी छाला फरक हुन्छ । महिलाहरु आफ्नो शरीरको रङसँग योनी बाहिरको छाला किन कालो भएको होला भनेर सोच्ने गर्दछन् । योनीको छाला कालो हुनु र अन्य कुराहरुमा केही सम्बन्ध हुन्छ कि भन्ने उनीहरुको…
२०७४, २९ आश्विन आईतवार १९:११ October 15, 2017 ताजा खबरस्वास्थ्य
१. सुरक्षित हप्ता महिलाको महिनावारी भएको आठौं दिनसम्म र महिनावारी सुरु हुनुभन्दा एकहप्ता अगाडीको समयलाई सामान्यतया शुरक्षीत अवधी मानीन्छ ।यो अवधीमा महिलाको पाठेघरमा डिम्व ननिस्किने हुनाले उक्त अवधीमा योनीभित्रै विर्य परेपनि महिलाहरु गर्भवती हुँदैनन् । तर महिलाहरुको महिनावारी हुने प्रक्रिया…